Best a380 amin'ny rikooo?
fanontaniana Best a380 amin'ny rikooo?
2 taona 3 volana lasa izay #522 by ItzDan
Tsy afaka aseho ny sarintany, mbola tsy namaritra toerana iray ianao.
Tsy misy mahalala izay a380 tokony hahazo
2 taona 3 volana lasa izay - 2 taona 3 volana lasa izay #525 by Dariussssss
Tsy azoko antoka fa azoko izany ... Midika ve maimaimpoana maimaim-poana na payload ianao, ho an'iza ny simulator?
Freeware, iray ihany ny Project-Airbus A380. Payware, maro amin'izy ireo ... Wilco, AFS ... dia tsy mahatsiaro azy ireo mihitsy aza.
Ny fampahalalana bebe kokoa dia mety tsara.
Fanovana farany: 2 taona 3 volana lasa izay Dariussssss.
2 taona 3 volana lasa izay #535 by Gh0stRider203
tsy. Airbus ....... miaraka amin'i Boeing lol
2 taona 3 volana lasa izay #536 by Dariussssss
Raha ny ankamaroan'ny sims izay fantatro dia tsy misy ilàna azy ny fiaramanidina Airbus. Izaho dia efa mpankafy Airbus mpankafy nandritra ny taona maro, ary tsy maintsy nihemotra ny lamosiko, noho izany.
Izaho no olona sambatra indrindra hiainako hahita ireo fiaramanidina ireo toy ny hoe Boeing, saingy ... izany dia fitifirana lava.
2 taona 3 volana lasa izay #537 by Gh0stRider203
Tsy afaka ny tsy mety amin'ny Queen of the Skies ianao
Efa niasa hatramin'ny 1970 izy; Izy no fitaterana voalohany ho an'ny filohan'i Etazonia hatramin'ny 1986; Mora amin'ny maso izy; Raha azonao ny modely mety (ireo eto Rikoooo, TSY mety hilaza teny ratsy momba izany aho, ary avy amiko izy amin'ny maha-mpanamory fiara, TSY mpandrindra), dia mitazona toy ny nofinofy izy;
Mila miteny bebe kokoa ve aho?
Ho ela velona ny mpanjakavavy! (ny 747 izay heh)
Fotoana mamorona pejy: 0.372 segondra